Izizathu zokuthi kungani sithanda kakhulu i-Coil Spring Matress | Rayson
Izizathu zokuthi kungani sithanda kakhulu i-Coil Spring Matress
Lokhu kufana kakhulu ne-Amazon (NASDAQ: AMZN) / WONKE FODS (WFM). U-Yonghui waqala ukusebenzisana noJingdong ekuqaleni kuka-2016. Ngokuqondene nanamuhla, i-Yonghui inezitolo ezingaphezu kwama-80, ivumela amakhasimende ukuthi abeke ama-oda ekhaya alinde ukulethwa ekhaya. U-Yonghui noJingdong banesisekelo samakhasimende ahlukile ezindaweni ezihlukile zokuthengisa; Imininingwane eqoqwe kusuka e-YongHhii indawo yamanje, engasiza i-jingdong ithathwe kangcono isithombe salabo abangathenga online futhi balungiselele kangcono ukwanda okulandelayo.
Ukuqina, amandla kanye nekhwalithi ephezulu yabasebenzisi bephaneli kuphansi. \_ "Kunzima ukwedlula inani olitholayo, \_" kusho uWilson. \_ "
Isinyathelo 3: Sibuyekeze imithetho yedolobha engakhombisi esinye isibopho seStrata Corporation ukuze silondoloze futhi silungise i-Strata Lot. Kuleli phuzu, singaphetha ngokuthi umnikazi wedolobhana unesibopho sokuthuthuka komugqa wayo wepayipi / wamanzi ngaphakathi kwe-strata litho. Kepha thatha igxathu emuva uphinde ubuze: \_ "Yini ekuthakazeliseni bonke abanikazi?